सारदानगरमा ३ बर्ष पछि एम्बुलेन्स संचालनमा, स्थानीय मख्ख ! – MeroKhabarSathi
सारदानगरमा ३ बर्ष…
सारदानगरमा ३ बर्ष पछि एम्बुलेन्स संचालनमा, स्थानीय मख्ख !
शिव शर्मा भरतपुर । सारदानगरका स्थानीयले ३ बर्ष पछि फेरी आफ्नै ठाउमा एम्बुलेन्स सेवा पाउने भएका छन् । रेडक्रम सोसाइटी सारदानगर उपशाखामा रहेको एम्बुलेन्स करिव १३ बर्ष सम्म संचालनमा रहेपनि ३ बर्ष अगाडी बिग्रिएपछी सारदानगर बासीले आफ्नै ठाँउबाट एम्बुलेन्स सेवा पाउनबाट बन्चित भएका थिए । तर चितवन समाज हङकङले रेडक्रम उपशाखा सारदानगरलाइ एम्बुलेन्स सहयोग गरेपछि आफ्नै ठाउमा एम्बुलेन्स सेवा पाउने भएका हुन् । चितवन समाज हङकङले १८ लाख पर्ने ‘ख’श्रेणीको एम्बुलेन्स सहयोग गरेको हो । आज सारदानगरमा एक कार्यक्रमका बीच समाजका अध्यक्ष ओमराज गुरुङ्गले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरे ।
“केहि बर्ष देखि एम्बुलेन्स नहुदाँ अत्याबस्यक समयमा बिरामीलाई अस्पताल सम्म पुर्याउन निकै कठिन थियो ।” ३ वर्ष सम्मको असुविधालाई सारदानगर कि भवानी गुरुङले भाबुक हुदै भनिन, “मेरो माइली बुहारी सुत्केरी हुदाँ एम्बुलेन्स नपाएर म्याजिक भ्यानमा अस्पताल लैजानु परेको थियो । अव त्यो असुविधा यहाँका स्थानियलाई हुने छैन ।”
अर्का ६४ बर्षीय बृद्द कृष्ण गुरुङले भने, “आज सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्स पाउदा खुसि लागेको छ ।”
हङकङमा रहेका नेपालीहरुले आफुले सकेको सहयोग र विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रम एवं च्यारिटि सो मार्फत आवस्यक रकम संकलन गरेको अध्यक्ष ओमराज गुरुङले बताए ।
उनका अनुसार ६० प्रतिशत चितवन समाज हङकङको र ४० प्रतिशत रेडक्रस उपशाखा सारदानगरको लगानीमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । २ बर्ष अगाडी चितवनको माडी कल्याणपुरमा समाजले एम्बुलेन्स सहयोग गरेको थियो । एम्बुलेन्सलाई रेडक्रस उपशाखा सारदानगरले संचालन गर्ने छ । चितवन समाज हङकङमा चितवनबाट हङकङ गई बसोबास गर्ने डेढ सय सदस्य आवद्द छन् । प्रति किलोमिटर ४० रुपैयाका दरले भाडा निर्धारण गरेर एम्बुलेन्स संचालन गर्ने रेडक्रम उपशाखा सारदानगरका सभापति बसन्त कुमार पौडेलले बताए । उनका अनुसार गरिव तथा बिपन्नका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिने छ ।
एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रमको उद्घाटन भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले गरिन् । समाजले यस अघि पुर्व चितवनमा चेपांङ्ग समुदायका बिद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग, पिठुवामा अपाङ्गता भएका भरत गुरुङ्गलाइ १ लाख ५० हजार, दिव्यनगरमा दृष्टिबिहिन बिद्यार्थी रचना ढकाललाई १२ हजार रुपैयाँ, गोरखाको चिप्लेटीमा भुकम्प पिडितलाई ३ लाख बराबरको राहत, इच्छाकामना गाउपालिकामा ३ लाख बरावरको टिन सहयोग गरेको थियो ।
इन्द्रपुरीको त्रिवेणी डेरीले रजत महोत्सव मनाउने
काठमाडौं–पोखरा–लुम्बीनी रेलमार्गको लागि करीब ७ अर्ब लगानी आवश्यक